काठमाडौँ, २७ साउन । अमेरिकी अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्था ९नासा० ले सूर्यको सतहको अध्ययनका लागि आइतबार एक अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलरको महत्वाकाँक्षी एवं ऐतिहासिक अभियान
नोबेल पुरस्कार बिजेता भिएस नाइपलको मृत्यु
काठमाडौँ,२७ साउन । नोबल साहित्य पुरस्कार विजेता लेखक भिएस नाइपलको ८५ वर्षको उमेरमा लण्डनस्थित उनको निवासमा निधन भएको परिवारले जनाएको छ। सन् १९३२ मा ट्रिनिडाडमा जन्मिएका उनी आफ्ना महान् साहित्यिक
काठमाडौँ, २६ साउन । इन्डोनेसियाको लोम्बोक द्वीपमा एक हप्ता अगाडि गएको शक्तिशाली भूकम्पका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ३८७ पुगेको छ । भूकम्पको कारण हजारौ विस्थापित भएका छन् । ती व्यक्ति
किन लेखे काँग्रेस नेता राहुल गान्धिले प्रधानमन्त्री नरेन्द मोदी लाई पत्र ?
काठमाडौँ, २६ साउन । केरलामा निरन्तरको मुसलधारे बर्षाका कारण आएको बाढी तथा पहिरोले स्थानीय वस्तीहरूलाई प्रभावित बनाएपछि ठूलो सङ्ख्यामा नागरिकहरू विस्थापित बनेका छन् । दक्षिण भारतको उक्त इलाकामा पहिरो तथा
वासिङ्टन, २६ साउन / अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याँक्रोबीच शुक्रबार साँझ फोनवार्ता भएको छ । उहाँहरुबीच व्यापार साझेदारी, सुरक्षा मुद्धा र हालैमात्र इरानसँग विकसित पारमाणविक मुद्धा
देशनिकाला गरिएका आप्रवासी पुनः अमेरिका फिर्ता
काठमाडौँ,२६ साउन । संयुक्त राज्य अमेरिकामा एक सङ्घीय न्यायाधीशले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा नै अधिकारीहरूले देशबाट बाहिर पठाइदिएका एक महिला र उनकी छोरीलाई पुनः अमेरिका झिकाउन आदेश दिएका छन्।
काठमाडौँ,२६ साउन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याँक्रोबीच शुक्रबार साँझ फोनवार्ता भएको छ । उनिहरुबीच व्यापार साझेदारी, सुरक्षा मुद्धा र हालैमात्र इरानसँग विकसित पारमाणविक मुद्धा र
अमेरिका-चीन र रुसबीच आणविक अस्त्र बनाउने होडबाजी !
काठमाडौं, २६ साउन । शीतयुद्धताका चर्चा हुने गरेको अस्त्रको विकास बिस्तारै वास्तविकतामा परिणत हुन थालेको देखिन्छ । चीनले गत हप्ता स्टारी स्काइ २ नामक हाइपरसोनिक विमानको परीक्षण गरेको घोषणा गर्‍यो।
किन पाएनन एअर इन्डियाद्वारा कर्मचारीको तलब ?
काठमाडौँ, २५ साउन । ऋणमा डुवेको एअर इन्डिया कम्पनीले कर्मचारीको तलब निरन्तर पाँचौँ पटक समयमा बुझाउन असमर्थ भएको छ । भारतको राष्ट्रिय ध्वजावहाक विमान कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीले अगस्टको १० दिन